अभिनेत्री साई पल्लवीले दुई करोड दिँदा पनि फेयरनेस क्रिमको विज्ञापन गर्न किन अस्विकार गरिन त ? – Dailny NpNews
अभिनेत्री साई पल्लवीले दुई करोड दिँदा पनि फेयरनेस क्रिमको विज्ञापन गर्न किन अस्विकार गरिन त ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २९, २०७८ समय: ९:३२:२७
एजेन्सी(बलिउड अभिनेत्री साई पल्लवीको जन्म ९जन्म ९ मई १९९२०,मा भएको हो । उनि एक सफल अभिनेत्री मात्र नभई असल छोरी समेत रहेकी छिन् । उनले दर्जनौ फिल्लमा अभिनय गरेर चर्चामा आएकी छिन् ।
उनि बलिउडमा बिभिन्न कारणले चर्चामा आइरहन्छिन् । २९ वर्षीया नायिका पल्लबीलाई दुई करोड भारुको बिज्ञापनको अफर गरिएको थियो । उनलाई फेयरनेस क्रिमको विज्ञापन अफर गरेपछाडि उनले अस्विकार गरेकी हुन् ।
सुन्दरताकी खानि उनले एक अन्तबार्तामा यस्तो बिषयमा खुलेर कुरा गरेकी छिन् । उनले मुस्कुराउदै भनिन् । कालो भारतीय रङ हो,’ ‘हामी विदेशीसँग ‘तिमीहरूको छालाको रङ सेतो किन छ रु’ भनेर सोध्न सक्दैनौँ ।
श्रीमानलाई असाध्यै माया गर्छन यी ४ राशीका श्रीमती, तपाईको कुन ?
काठमाडौँ । कसको चाहाना हुँदैन श्रीमान् श्रीमती सधै हांसी खुशी बाँचौ। तर कसैको त्यो चाहनामा कहिलेकाँही ठे’स लाग्छ, कसैको भने पुरा हुन्छ। कोहि महिला आफ्नो श्रीमानको इच्छा चाहनाको ख्यालै नगर्ने स्वा’र्थी हुन्छन् भने कोहि महिला आफ्नो श्रीमानलाई सुखी र खुशी राख्न कुनै क’सुर बाँकी राख्दैनन्।
ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार कसैले सुखी र खुशी खोजेर मात्रै पाउने होइन त्यो त आफ्नो ग्रह द’शा र राशिअनुसार जुर्नु पर्छ। यहाँ हामी त्यस्ता राशि भएका युवतीका बारेमा कुरा गर्न गैरहेका छौं जसले श्रीमानलाई हर समय हर सम्भब खुशी राख्न चाहन्छ।
यी राशि भएका व्यक्तिले आफ्नो पतिलाई जति दुख परेपनि साथ छोड्दैनन्। यी राशी भएका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन।आफ्नो पतिलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि साम, दाम,द’ण्ड, भे’दको समेत प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन्। यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरलाई स्वर्ग बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गरिरहन्छन्।
यो राशी भएका महिलाहरु अफ्ठ्या’रो परिस्थतिमा रु’ष्ट रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने क्षमताका हुन्छन्। यस राशिका महिलाहरु आफ्नो पतिलाई सजिलैसँग आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गर्छन्।
पतिको कुरा सुन्दै परिवारमा राज गर्ने यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कुरा राख्न अलिकति पनि ड’राउदैनन् । परिवारको हरेक कार्यमा आफै हा’वी हुने आदत यिनीहरुमा हुन्छ।
यो राशी भएका महिलाहरु जि’द्दी हुन्छन्। साथै अरुलाई सहजै मनाउन सक्ने खुबी यिनीहरुमा हुन्छ। घर परिवारमा हुने हरेक कार्यको निर्णयमा आफ्नै प्रभाव जमाउने खालका हुन्छन्।श्रीमानलाई मनाउन यिनलाई कुनै क’ठिनाई हुँदैन। कर्कट राशि भएका बुहारीले घरमा राजनै गर्छन्।
यो राशी हुने महिला व्यवहारमा अत्याधिक जि’द्दी मानिने र आफ्नो पतिलाई जि’द्दीले नै नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुने गर्छन। कर्मघरमा हुने हरेक कार्यमा आफ्नो संलग्नता कायम राख्न खप्पिस हुनाले आफ्नो कर्मघरमै राज नै गर्ने गर्छन्। यस राशिका महिलाहरुसँग हरेक परिस्थितिमा आफ्नै तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने खुबी हुन्छ।